Into iqala ngaphandle njengoko elikhulu uthando kwi-fairyname ibali iphela, ngelishwa, kuphela kaninzi kwi jones wefilim. I-butterflies iphaphazela ngumthetho, umntu Umfazi ukuphila ngaphandle, kuba ngaphantsi Ngesondo kwaye babambisa, ngesiquphe imagining oko bekuya kuba njengaye ukuba ube kunye umntu ongomnye. Kodwa kutheni na ke abaninzi budlelwane nabanye ngendlela okunokukhethwa kuko. Kwaye kutheni siyazi ke ezimbalwa couples esenza, ukuba ufuna ukuba aliqela eminyaka kuphela ngamnye enye. I-Kwisizukulwana budlelwane, sisebenzisa ngenene ayikwazi. Siyafuna ukuba uyazi, kwaye ndithethe kunye unhappy watshata abantu. Kwaye kwaba abasebenzi abaqhankqalazayo kukangakanani baya iphindwe ezi zinto, baya ulawulo uninzi umfazi ke frustration, kufuneka ube wayemthanda kakhulu. ‘Ndinqwenela onqwenela ukubona kwam yonke imihla, into sithande xa ndifumana ekhaya evela emsebenzini. Endaweni yoko, yena assails kum literally kunye izinto ndidinga ukwenza, kwaye uluhlu into endinayo zilityelwe. Ndiza emi apho ngathi i-Idiot, kwaye ummangaliso kutheni ndiza apha, ngoko ke kwangoko ukuya kufika ekhaya, ndiyazi ngemihla Theater. Ndiyayazi unga kokuba abantwana a uxakekile mini. Kodwa bekuya kuba mnandi ukuba ubuya ukumbule ukuba mna anayithathela sele isebenza imini yonke. (Daniyeli, kuba iminyaka watshata). ‘Ukuba ukhe nje kuhlangatyezwana nazo kunye ngamnye ezinye isebenzisa ngaphandle, kubalulekile ngoko ke kakhulu fun. Ngelishwa, le kakhulu decreases, ukuba omnye utshate. Ngemisebenzi noxanduva lwawo everyday ubomi roll i-Elan kancinci cambalala, kunye osetyenziselwa ngamnye enye. Endaweni ngaphandle kokuya, ehleli kwi Couch kwaye ukubukela i-TV. Ukuba ayikho indlela mna imagined Bubonke ubomi bam. (Jan, kuba iminyaka, watshata). ‘Kutheni yena hayi nam ngakumbi romanticcomment. Wena musa ufuna touch me kwaye sleeps kuphela reluctantly nam (abantu musa isaziso xa zabo umfazi silapha kunye nto, kwaye Ngesondo kamsinya nje ufuna ukuzisa). Mna kuba ndinovelwano ukuba ayisasebenzi ngoko ke kum, njengoko phambi’. (Udavide, kuba iminyaka watshata). ‘Xa umfazi wam kwaye ndandidibana, wayengomnye omkhulu kwi-umandlalo, wathabatha kum nge-surprise ngu constantly igqityiwe kunye entsha sexy zinto, kwaye waba kakhulu keen ukuba name. Mna ke andwebileyo malunga nayo. Kodwa ngokukhawuleza nje, sitshatile, sele decreased ndivuma kakhulu, njengoko ukuba ubufuna ukutsala kum nge wabo wonke yokuhamba-hamba, kwaye ngokukhawuleza nje yonke into waba sika kwaye dried, sele segolide ukuba azame’. (Leon, kuba iminyaka watshata). ‘Ndandicinga ukuba waba ngokwenza yakhe a Ukuthandwa ngokukuvumela ukuba chonga kwaye khetha into siya kudla njani indlu yethu kukuba ehonjisiweyo. Kodwa yena waba kakhulu frustrated, ngenxa wacinga, ndiza zonke kuba oko. Endaweni uthetha nam, wathi, badle into kuphela ngokwakhe kwaye snaps ngexesha rhoqo amathuba okuphumla ngokupheleleyo’. (Kayona, kuba iminyaka watshata). ‘Yena complains constantly.
Akukho mcimbi oko ndiyakwenza, yena complains e yonke nje into. Mna umhlambi i-Laundry ezingachanekanga indlela kwaye ukusika i-itswele ngathi i-Idiot. I-tan ruin, xa ndiya kwenza fried amaqanda, kwaye. Ndivumeleni, nceda, ubuncinane, ukongeza ngaba zikho kwi kunyulo olunoxolo hlobo. (Arne, kuba iminyaka watshata). ‘Oko sele ukususela wokuzalwa zethu intombi ngokupheleleyo. Ndibathanda umfazi wam kwaye ngenene musa ufuna ukuba isandi superficial, kodwa kwaba a ngenene steep Tooth, kwaye wenze intliziyo, ngelishwa, kwi umntu, apho abantu jika jikelele. (Mike, kuba iminyaka watshata). ‘Wena musa constantly complains andivuyiswa ukuqonda kwenu, kwaye umphinda-phinde ngo mhla yakho imigca enqamlezeneyo kufuneka ukuchitha. Kodwa bamele kanjalo hayi nyani nzima ukuqonda kwam wam iingxaki. Ngu-umcimbi ka ngubani na ilungelo.
Kwaye ukuba ke ezibuhlungu
(Philipp, kuba iminyaka watshata). ‘Uthetha non-stop malunga nabantwana. Yesikolo ngayo Uyohane, okanye cough ka-Marie zi inzala kum kanjalo, hayi umbuzo, kodwa ndinqwenela kuba ngaphezulu eqhelekileyo iincoko malunga ubomi, hayi nje abantwana. Kanjalo ukuba abantwana benza phezulu enkulu yinxalenye yakho everyday ubomi. (Florian, kuba iminyaka watshata). ‘Umfazi wam ingaba ngenene watshata yabo umsebenzi. Ndinguye ninoyolo nina, ukuba yena uthanda wakhe Umsebenzi ngoko ke kakhulu, kodwa yena kuzisa ngoko ke kakhulu umsebenzi wasekhaya okokuba ndiya kuba ndinovelwano ukuba kufuneka zange ngenene kuba nam. Ukuba ufaka pretending ukuba umamele kum, mna ukuva ukuba i ezongeziweyo kwimali kodwa akukho mntu ufumana ekhaya. Yena ufumana zange ngokupheleleyo apho kuba kum, kodwa kusoloko kwenye indawo okanye nge ngengcinga.
(Stefan, kuba phantse unyaka watshata)
← Okulungileyo imibuzo nge-WhatsApp ukuba umfana. (Girls, Guys, Bahlangana)
Kwi-intanethi ividiyo incoko ngaphandle ubhaliso - imihlaba enesanti →